अन्तरालको सिद्धान्त (GAP THEORY)
चाबी प्रश्नद—उत्पत्ति १:१ र १:२ को बीचमा अन्तराल (GAP) छ? चाबी वाक्यांश—“आकारबिनाको र शून्य” (उत्पत्ति १:२)
१)	कतिको धारणाअनुसार, तल चित्रमा देखाइएझैं उत्पत्ति १:१ र १:२ को बीचमा एउटा ग्याप अर्थात् समयको अन्तराल हुनुपर्छ।
२)	अन्तरालको सिद्धान्त (Gap Theory) का कतिपय समर्थकहरूको विश्वास अनुसार उक्त समयावधिमा, आदमको सृष्टि हुनुभन्दा पनि अगाडि, एक मनुष्य जाति (कुनै प्रकारको “पूर्व-ऐतिहासिक मानवहरू”) पृथ्वीमा जिउँदथे! आदम सृष्टि-साताको कुन दिनसम्म सृष्टि गरिएका थिएनन् (उत्पत्ति १:२६-३२)? ________________ यसको अर्थ यो हुन्छ कि यदि यस अन्तरालको समयमा पृथ्वीमा कुनै मानिसहरू जिएका भए, तिनीहरू आदमभन्दा अगाडी बाँचेको हुनुपर्छ!
३)	उक्त अन्तराल (GAP) मा संसारमा किन त्यस्तो भयानक इन्साफ भएको थियो? लुसिफरको पापले नै उक्त इन्साफ आएको भनी अन्तराल (GAP) मा विश्वास गर्नेहरूले दावी गर्छन् जसको फलस्वरूप पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य हुनगयो (“became”) भन्ने अर्थ उनीहरू लगाउँछन्।
४)	लुसिफरको पापको कारणले परमेश्वरले संसारको इन्साफ गर्नुभयो भनी उनीहरूले बताउँछन्। यो कस्तो किसिमको इन्साफ थियो? अन्तराल (GAP) मा विश्वास गर्नेहरूले उक्त इन्साफ विश्वव्यापी जलप्रलयद्वारा भएको विश्वास गर्छन्। यो नूहको जलप्रलय थिएन किनभने उत्पत्ति ६-८ अध्यायसम्म उक्त जलप्रलयको कुरा गरिएको छैन। उनीहरूको बिचारमा यो पहिले नै भएको जलप्रलय हो जसलाई उनीहरूमध्ये कसै-कसैले “लुसिफरको जलप्रलय” भनी नाम दिन्छन्। के साँच्चै त्यस्तो जलप्रलयको अस्तित्व थियो? के बाइबलले त्यस्तो जलप्रलयको बारेमा केही बताउँछ? के बाइबले दुई ओटा जलप्रलयको उल्लेख गर्छ?
६)	अन्तराल (GAP) मा विश्वास गर्नेहरूले लुसिफरको पापको कारणले संसारमाथि आएको परमेश्वरको इन्साफको कारणले “पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य” ( उत्पत्ति १:२) भयो भनी बताउँदछन्।
७)	उत्पत्ति १:२ले बताउँछ, “अनि गहिरा सागरको सतहमाथि ______________ थियो”। अन्तरालमा विश्वास गर्नेहरूले उत्पत्ति १:२ मा भएको “अन्धकार” शब्दले पाप र इन्साफको वर्णन गर्दछ भनी भन्दछन्। कहिलेकाहिँ बाइबलले “अन्धकार” शब्दलाई पापपूर्ण अवस्थाको वर्णन गर्न प्रयोग गर्दछ। उदाहरणको निम्ति, यूहन्ना ३:१९-२० ले बताउँदछ कि मानिसहरूले ज्योतिलाई भन्दा बरू अन्धकारलाई प्रेम गरे (यी पदहरू पनि हेर्नुहोस्: यूहन्ना १:५; ८:१२; प्रेरित २६:१८; कलस्सी १:१३; १ पत्रूस २:९; १ यूहन्ना १:५-७; २:९-११)। हाम्रो पापको निम्ति ख्रीष्टको इन्साफ हुँदा के भएको थियो (मत्ती २७:४५)? __________________ के परमेश्वरले कहिलेकाहीँ अन्धकार पठाएर पनि संसारको न्याय गर्नुहुन्छ (प्रस्थान १०:२१-२३; प्रकाश ८:१२; १६:१० पढ्नुहोस्)? ________________ त्यसैले, उत्पत्ति १:२ मा भएको “अन्धकार”ले अन्तरालको समयमा परमेश्वरले संसारको इन्साफ गर्नुभयो भनी प्रमाणित गर्दछ भनी बताइने गरिन्छ। तर के यो साँच्चै सत्य हो? के “अन्धकार” शब्दलाई जहिल्यै पनि दुष्टताको चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिएको छ? के सिद्ध पृथ्वीमा अन्धकार हुँदैन? के परमेश्वरले अन्धकारको सृष्टि गर्नुभएको हो?
८)	मूल सृष्टिमा संसार सिद्ध थियो (उत्पत्ति १:१)। यदि अन्तरालको समयमा पृथ्वीको इन्साफ भएको र नष्ट भएको भए, परमेश्वरले सृष्टिको आफ्नो कार्यलाई फेरी दोहोर्याउनुपर्ने हुन्थ्यो! उहाँले आकाश र पृथ्वी दोस्रो पटक सृष्टि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो! त्यसो भए, उत्पत्ति १ का ६ दिनहरूले सृष्टिको नभएर “पुनर्सृष्टि” को बयान गर्छ। यी ६ दिनहरूमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीको पुनर्सृष्टि (पुन: बनाउने काम) गर्नुभयो। अन्तराल-इन्साफ (GAP-judgment) अगाडि, त्यहाँ वनस्पतिहरू, पशुहरू र मानिसहरू समेत पृथ्वीमा जिउने गरेका थिए। तर लुसिफरको इन्साफमा तिनीहरू सबै नाश भए, र परमेश्वरले पुन: एकचोटि जीवनको सृष्टि गर्नुपर्यो। त्यसैले उत्पत्ति १ अध्यायले परमेश्वरको मूल सृष्टिको वर्णन गर्दैन तर यसले परमेश्वरले गर्नुभएको आकाश र पृथ्वीको पुनर्सृष्टिको वर्णन गर्दछ भनी यी मानिसहरूले विश्वास गर्दछन्।
१०)	के त्यहाँ साँच्चै उत्पत्ति १:१ र १:२ बिचमा अन्तराल छ? के परमेश्वरले हामीले पदहरूको बिचमा वा वाक्यहरूको बिचमा पनि अतिरिक्त लेख पढेको चाहनुहुन्छ? यदि त्यहाँ साँच्चै अन्तराल हुने हो भने, किन त्यहाँ उक्त अन्तरालको बारेमा र त्यस समयमा साँच्चै के भएको थियो भनी बताउने पदहरू छैनन् त?
१.	अन्तरालको समस्या
दुष्ट आत्माहरू कहाँबाट आए? के दुष्ट आत्माहरू आदम सृष्टि गरिनुभन्दा अगाडि पृथ्वीमा भएका दुष्ट मानिसहरूका आत्माहरू हुन्? होइन, बाइबलअनुसार तिनीहरू शक्तिमान परमेश्व_रको विरुद्धमा उठेको शैतानको विद्रोहमा लागेका स्वर्गदूतहरू हुन्। जोडा मिलाउनुहोस्--
क) _____ पवित्र स्वर्गदूतहरू	१) मत्ती ९:३४; मत्ती १२:२४
ख) _____ शैतानका दूतहरू	२) २ पत्रुस २:४ र यहूदा ६
ग) _____ एक तिहाइ स्वर्गदूत शैतानलाई पछ्याउँछन्	३) मत्ती २५:३१
घ) _____ शैतान दुष्टआत्माहरूका शासक हुन्	४) प्रकाश १२:४
ङ) _____ स्वर्गदूतहरू जसले पाप गरे	५) मत्ती २५:४१; प्रकाश १२:७